Hawlgallo ay wadaan ciidanka amniga oo ka socda Galkacy iyo dadka alaabooyinka wareejiyey oo la mamnuucay. – Radio Daljir
Hawlgallo ay wadaan ciidanka amniga oo ka socda Galkacy iyo dadka alaabooyinka wareejiyey oo la mamnuucay.
Maajo 10, 2010 12:00 b 0
Galkacyo May 10 ? Ciidamada ammaanka ee magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland ayaa dhawrkii toddobaad ee ugu danbeeyey ku guda jiray hawlgallo is daba-jooga ah oo ay amniga ku adkaynayeen.
Hawlgalladaan oo illaa iyo haatan socda ayaa laga fulinayey xaafadaha kala duwan ee magaalada Galkacyo iyadoo xilliga habeenkii ahna baaritaanno dheeraad ah lagu samaynayey gaadiidka maraya waddooyinka magaalada Galkacyo.
Ciidamada bileyska ayaa hawlgalladoodu ku abbaarnaayeen dhawr arrimood oo ay ugu horrayso xoojinta nabadgalyada, iyadoo dhammaan la fiiqayey baabuurta leh bacadaha madmadaw ee beersoolka loo yaqaanno, sidoo kalana hubinayey gaadiidka canshuuran iyo midka aan canshuurnayn.
In badan 150 gaari oo kala duwan ayaa intii hawlgallada bileysku ay socdeen lagu soo xirxiray xerada qaybta bileyka ee gobolka Mudug, kuwaasi oo lagu helay danbiyo iskugu jira xirashada bacaha madmadaw ee muraayadaha baabuuta lagu dhajiyo iyo bixin la?aan canshuureed.
Baabuurta lagu soo xareeyey qaybta bileyska ee lagu soo qabqabtay hawlgalladii bileyska ee toddobaaddadii ugu danbeeyey laga waday Galkacyo ayaa badankooda lagu dhuftay ganaaxyo lacageed gaar ahaan gaadiidka lagu helay danbiga ah in ay xirteen bacaha muraayadaha lagu qariyo oo loo arko in ay qayb ka yihiin amni darrada, waxaana gaari walba lagu ganaaxay lacag dhan 2,500,000.
Taliyaha qaybta bileyska ee gobolka Mudug Col. Muuse Axmed C/raxmaan ?Muuse Xasaasi? ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan hawlgallada hadda ay ku hawllan yihiin, wuxuuna carabka ku adkeeyey in cidkasta oo lagu helo wax meel ka dhac ku ah amniga gobolka ay ciqaab la tiigsan doonaan.
Dhankale taliyuhu waxaa uu sheegay in ay magaalada ma mamnuuceen dadka alaabooyinka wareejiyey oo uu sheegay in ay caqabad ku yihiin ammaan oo ay illinkasta istaagayaan, waxaana sidoo kale uu sheegay in ay ku jaah-wareereen canshuuridda alaabooyinka dadkaasi ay wareejiyaan.
Sikastaba ha ahaatee hawlgallada ciidamada ammaanku ay ka wadaan magaalada Galkacyo ayaa ah kuwo la doonayo in lagu xoojiyo nabadgalayada gobolka, waxaana ay noqonaysaa markii ugu horraysay oo hawlgallo bileys lagu soo xirxiro gaadiid intaas le?eg.
Dr. Jimcaale, wasiirka dastuurka & arrimaha federaalka ee Puntland oo maanta la kulmaya qurbajoogta Puntland ee Minnesota, US.